a’iisul Wasaaraha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka oo kormeeray goobtii la dejin lahaa Odayaasha dhaqanka+Sawirro | puntlandforum.com
a’iisul Wasaaraha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka oo kormeeray goobtii la dejin lahaa Odayaasha dhaqanka+Sawirro April 30, 2012 Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr. C/wali Maxamed Cali, Gudoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan iyo Xubno ka tirsan Golihiisa Wasiirada ayaa maanta kormeer ku tagay goobtii la dajin lahaa Odayaasha dhaqanka Soomaaliyed.
Goobtan loo diyaariyay in la dajiyo Odayaasha dhaqanka ee ka qeyb galaya shir lagu soo xulayo 825-xubnood oo ka qeyb qaadnaya shirweynaha lagu ansixinayo Dastuurka ayaa waxaa ammaankeeda sugaya Ciidamada AMISOM iyo Ciidamo gaar ah.
Ra’iisul Wasaaraha iyo xubnihii wehliyay ayaa waxay warbixino ka dhageysteen Gudi loo xil saaray soo dhoweynta Odayaasha dhaqanka, kuwaas oo soo xuli doona Gudigii ansixin lahaa Dastuurka qabyo qoraalka.
Sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha ayaa warbixin ka dhageystay gudi iyana loo xilsaaray inay sugaan ammaanka goobta la dajinayo Ciidamada, oo isugu jira Ciidamada AMISOM iyo kuwa nabadsugida qaranka iyo Hey’adaha kale ee ammaanka ka shaqeeya.
Warbixinta kadib ayaa waxaa uu Ra’iisul Wasaaraha iyo Xubnihii la socday soo kormeereen goobtii loogu talagayay Odayasha Dhaqanka ee Soomaaliyeed in la dajiyo, isagoo Ra’iisul Wasaaruhu mid mid u galay qolalkii loogu tala galay Odayaasha Dhaqanka, kuwaasoo gaaray 135 Odey Dhaqameyd oo ka kala imaanaya gobalada dalka.
Odayaasha Dhaqanka ayaa la filayaa horaanta bishaan soo socota inay soo xulaan Ergadii ansixin laheyd Dastuurka Cusub ee Qaybo-Qoraalka dalka.